China Aluminium-ruoko rwakarukwa (AV-T78) vagadziri uye vanotengesa | Aviva
Aluminium-ruoko rwakarukwa (AV-T78)
4.Hand-rakarukwa Tambo Sachigaro (Olefin Saizi 15mm)
Sachigaro: 47 * 61 * 88CM
Zvakanakira kusarudza fenicha yakagadzirwa netambo yakarukwa
Fenicha inogadzirwa netambo yakarukwa inogona kuva sarudzo yakanyanya kunaka kune vanhu vari kutsvaga zvinhu zvavanogona kusiya kunze kwegore rese. Izvi zvinodaro nekuti tambo yakarukwa inopesana nemhando dzese dzemamiriro ekunze kusanganisira mhepo inorema nemvura inonaya.
Imwe bhenefiti yakarukwa tambo fenicha maererano nemamiriro ekunze ndeyekuti haitsakatike nyore kana yakaratidzwa kuzuva. Izvo zvinhu zvine polypropylene inopa zvakasikwa kudzivirirwa kubva kuzuva richipera pamwe nesimba rakawedzerwa. Varidzi vepamba vanogona kusiya fenicha yekunze pane patio kuburikidza nemwaka mina kana vachishuvira vasina kunetseka nezvekukuvara kwemamiriro ekunze. Ehezve, inogara iri zano rakanaka kuchengetedza kana kuvhara fanicha kana uchitarisira mamiriro ekunze akaomarara.
Tiri kufunga nezvekuisa yedu yakarukwa tambo cheya seti ingori chero kwese kwese. Chigaro chega chega chinogadzirwa nealuminium furemu, uye chine rakarukwa maoko maviri akarukwa kuitira kutaridzika kunotonhorera izvo zvinobatsira kuti ugare uchitonhorera kana mamiriro ekunze achidziya. Macheya aya anosvika akaungana zvishoma, kuti iwe ugone kumisikidza uye kunakirwa nemamiriro ekunze anodziya pasina nguva.
MUKUDZI ANOKOSHA VAKADZIDZWA ROPA FENicha
Tambo yakarukwa inopa chitarisiko chakapfava kupfuura mamwe marudzi emidziyo yemidziyo yesimbi kana aluminium. Izvi zvinogona kuita kuti patio kana imwe nzvimbo yekunze iite senge inogamuchira vaenzi. Kuwedzera gumbeze diki kana kukanda mutsago kunoita kuti zvioneke sekukoka semidziyo yemumba uye zvinofanirwa kuita kuti vashanyi vanzwe vari pamba chaipo. Iwo matsva ePalisades macheya (akafananidzirwa pazasi) anoratidza kuti dzakarukwa tambo zvinhu zvinogona kuve zvinoshamisira zvakasarudzika uye kugadzikana.
Pashure: Aluminium-ruoko rwakarukwa (AV-T76)
Zvadaro: Aluminium-ruoko rakarukwa Bistro Set (AV-T103)